Posted by: Mahad Mohamed April 25, 2020
Himilo – Maalinta Caalamiga ee Duumada ama Malaariyada waa baraarug guud oo sannad kasta la xuso bisha April 25-keeda – iyada oo lagu garowsado dadaallada caalamiga ah ee lagu maareynayo cudurkan. Duni ahaan, 3.3 bilyan oo ku kala nool 106 dal ayaa halis ugu jira Duumada.
Sannadkii 2012, cudurka Duumada waxaa u geeriyooday tiro lagu qiyaasay 627,000 kuwaas oo badankood kasoo jeeda qaaradda Afrika. Qaaradaha Aasiya, Latin Ameerika, tiro kooban oo kamid ah Bariga Dhexe iyo Yurub ayay sidoo kale Duumada saameyn ku leedahay.
Xuska Maalintan wuxuu soo alkumay bishii May sannadkii 2007-dii markaas oo lagu calaameeyey kal-fadhigii Guud ee Caafimaadka Dunida. Maalintanna, waxaa loo doortay si sarre loogu qaado aqoonta iyo fahamka la xiriira Duumada.
Iyada oo la kaashanayo dadaallada Maalinta Caalamiga ee Duumada, Maalinta Malaariyada Afrika waxaa markii ugu horreysay la qabtay sannadkii 2001 – gu’ kaddib ku dhawaaqistii taariikhiga aheyd ee Abuja oo ay saxiixeen 44 dal oo Afrikaan ah kuwaas oo la dhibban saameynta cudurkan.
Duumada waxaa si guud ugu badnaan looga helaa qaaradda Afrika iyo qeybo kamid ah koonfur bari qaaradda Aasiya. Dhaqan ahaan, dalal badan oo Afrika iyo koonfur bari Aasiya ku yaalla waxay ku jiraan heerka ugu sarreeya ee faqriga; dadkuna maheli karaan kahortagga cudurka Duumada iyo daawadeeda – mana helaan aqoon ay xaggeeda u leeyihiin.
Previous: 23 April – Maalinta Caalamiga ee Afka Ingiriiska
Next: Tallooyin ku saabsan Ramadaanka iyo kuleelka darran
Wax ka ogow maktabaddii lagu dhisay buugaagta lagu soo daro qashinka
11 July – Maalinta caalamiga ee dadyowga caalamka
Bazoule – Xaafad dadka iyo yaxaasyada ay wadajir ugu nool yihiin!